The Buddha (BC 623-BC 543) : ဩကာသ Okasa နှင့် လောကနီတိ Loka Niti အပိုင်း (၂) by- Myoma Myint Kywe မြို့ မ မြင့်ကြွယ်
ဩကာသ Okasa နှင့် လောကနီတိ Loka Niti
အပိုင်း (၂) Part 2
လောကနီတိ Loka Niti
'နီတိ' ဟူသော ဝေါဟာရသည် သင်္သကရိုက်ပါဠိ ဘာသာစကားဖြစ်၍ 'လမ်းညွှန်' ဟု အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုနိုင်ပေသည်။ လောကလူသားတို့ လိုက်နာအပ်သည့် လူမှုကျင့်ဝတ် နှင့် လူမှုစည်းကမ်းများ ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ထားချက်များ ကို ပေါင်းရုံး၍ လောကနီတိ ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခြင်းဖြစ်သည်။
ရှေးလူကြီးတွေ ထားရစ်ခဲ့သော စကားပုံများ၊ မှတ်သားလိုက်နာဖွယ် အဆိုအမိန့်များ၊ သင်ခန်းစာရယူဖွယ် ဇာတ်ကြောင်း ပုံပြင်တွေကနေ ကောင်းနိုးရာရာတွေကို စုစည်းထားတဲ့ လူမှုဆိုင်ရာ လောကနီတိကျမ်းသည် ဘာသာမရွေး၊ လူမျိုးမရွေး၊ အရွယ်သုံးပါး လိုက်နာဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။
လောကနီတိ သည် ဘုရားဟော ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း ဘုရားဟောကျမ်းဂန်များစွာမှ လောကီရေးရာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အဆိုအမိန့်များကို ထုတ်နှုတ်၍ ထည့်သွင်းပြုစုထားသော ကျမ်းဖြစ်သည်။
နီတိ သည် ပါဋ္ဌိဝေါဟာရဖြစ်သည်။ မြန်မာလို လမ်းညွှန် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ လောကနီတိသည် လောကအကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကြီးပွားတိုးတက်စေရန် ညွှန်ကြားသော လမ်းညွှန်ကျမ်းဖြစ်သည်။ စင်စစ် ဤကျမ်းသည် လောက၌ လူသားတို့၏ အနှစ်လည်းမည်၏။ မိဘလည်းမည်၏။ ဆရာလည်းမည်၏။ အဆွေခင်ပွန်း လည်းမည်၏။ ထိုကြောင့် ဤ နီတိကျမ်း ကို သင်ကြားတတ်မြောက်သော ယောက်ျားသည် အကြားအမြင်များသော၊ မြင့်မြတ် သော ပညာတတ်ယောက်ျား ဖြစ်၏။
လောကနီတိ ဆိုတာ ပါဠိ စကားဖြစ်ပြီး မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရသော် "လူ့ဘောင် လောက ၏ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြ" ဟု လည်း အဓိပ္ပာယ်ရသည် ။ လောကလူသားတို့၏ သိမှတ်လိုက်နာသင့်သော ကျင့်ဝတ်များ၊ လူစည်းကမ်းများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ စုစည်းထားသော ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ ဖြစ်ပါသည်။ လူ့ဘောင်လောကတွင် အကျုံးဝင်သူတိုင်း အတွက် ကျန်းမာရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ အသိပညာ ရှာဖွေဆည်းပူးရေးမှစတင်၍ အခန်းကဏ္ဍစုံလင်စွာ ရှေ့ဆောင် လမ်းပြပြုပေးနေသဖြင့် လောကနီတိ ဟူသောအမည်ဖြင့် လိုက်ဖက်လှပါပေသည်။
လောကလူသားတို့ သိမှတ်လိုက်နာအပ်သည့် လူမှုကျင့်ဝတ် (Social Conduct) နှင့် လူမှုစည်းကမ်း (Social Disciple) များဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော် လမ်းညွှန်ထားချက်များကို ပေါင်းရုံး၍ လောကနီတိ ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် လူသားတိုင်း လောကနီတိ ကို ဖတ်ရှုသုံးနှုန်းသင့်ပေသည်။
The term "Loka Niti" is derived from the Sanskrit-Pali, meaning "guidance". It isacombination of social conduct and social discipline which human beings ought to abide by, and , as such, it is called "Loka Niti".
The proverbs bequeathed to us by ancient people, words worthy of abiding by, stories which provide moral lessons and all that is worthy of attention have been compiled, culminating in the production of this treatise which should be specially desired for adherence by people of all ages regardless of religion or race.
ဤလောက၌ အတတ်ပညာနှင့် တူသော
အတတ်ပညာကို ခိုးသူတို့ မခိုးယူနိုင်၊
အကြားအမြင် ပညာကို နည်းသည်ဟူ၍
လေ့လာစည်းပူး၍ စိတ်၌ သိုမှီးသိမ်းဆည်းထားရာ၏။
ခြပုရွက်တို့ စုဖို့၍ မြေတောင်ပို့ကို ရသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊
ကျဖန်များသော မိုးရေပေါက်များသည် ကြီးမားသော
အိုးစရည်းကို ပြည့်စေနိုင်သကဲ့သို့လည်းကောင်း မှတ်ယူအပ်၏။
နှုတ်မှု၊ လက်မှု အတတ်ပညာကို သေးငယ်သည်ဟု
ပြည့်စုံကုန်အောင် တတ်မြောက်ပါမူ တစ်ခုသော
အတတ်ပညာသည်ပင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနိုင်ပေ၏။
အရပ်ဌာနတိုင်းတွင်လည်း ပညာရှိ သုခမိန်မရှိ။
အရောက်သွားပြီး ပညာကို ကြိုးစား၍ ဆည်းပူးသင်ယူရာ၏။
မမေးသည်ဖြစ်စေ လွန်မင်းစွာ ပြောဟောတတ်ပေသည်။
ပေပုရပိုက်စာရွက်၌ ရေးထားအပ်သော အတတ်ပညာကို
ထို့အတူ သူတစ်ပါးလက်ဝယ်၌ရှိသော ဥစ္စာကိုလည်း
ပညာရှိသည်မရှိသည်ကို ပြောဆိုသော စကားကို
ဗဟုသုတနည်းသူသည် အနည်းငယ်မျှသော သုတကို များသည်ဟု
သမုဒ္ဒရာရေကို မမြင်ဖူးသော ဖားငယ်သည် တွင်းငယ်ရေကို
ဒုတိယ အရွယ် ဥစ္စာရှာ၊
အတတ်ပညာမရှိသူသည် သူတစ်ပါး၏ ၀န်ကိုထမ်းရ၏။
အတတ်ပညာရှိသူသည် သူတစ်ပါး၏ ဂုဏ်ပြုခြင်းကို ခံရ၏။
ထို့ကြောင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အတတ်ပညာကို ရအောင်
မိဘတို့သည် သားသမီးကို ငယ်စဉ်ကပင် အတတ်ပညာကို
အတတ်ပညာကို သင်မပေးခဲ့မူ ဟင်္သာတို့အလယ်၌
ဥဗျိုင်းငှက်သည် မတင့်တယ်သကဲ့သို့ ပရိသတ်ဗိုလ်ပုံအလယ်၌
အတတ်ပညာကင်းမဲ့သောကြောင့် သားနှင့် မိဘတို့သည်
ဆူးကိုအဘယ်သူချွန်၍ ထက်သနည်း၊ သမင်မျက်လုံးကို
အဘယ်သူ မျက်စဉ်းခတ်၍ ကြည်လင်သနည်း၊
ရွံ့ညွန်၌ပေါက်သော ကြာပန်းကို အဘယ်သူရနံ့ထည့်၍
အရသာပျက်ကြောင်း တရားလေးပါး တို့သည်ကား
- ထုံးမပါသာ ကွမ်း၊
- ဆားမပါသာ ဟင်း၊
- ဥစ္စာပစ္စည်းမရှိဘဲ ၀တ်စားတန်ဆာ ပလွှားမော်ကြွား ၀တ်ဆင်ခြင်း၊
- ပညာမတတ်ဘဲ ပျို့ ၊ ကဗျာ၊ လင်္ကာ ဖွဲ့ဆိုခြင်းတို့ပေတည်း။
ကောင်းစွာနာကြားမှတ်သားခြင်းကြောင့် သုတနှင့် ပြည့်စုံရ၏။
အိပ်ခြင်း၊ စားခြင်း၊ မေထုံမှီဝဲခြင်းအမှုတို့၌
အတတ်ပညာသည်သာလျှင် နွားထက် လူကသာလွန်သော
အတတ်ပညာနှင့်တူသော မိတ်ဆွေသည် မရှိ။
အနာရောဂါနှင့်တူသော ရန်သူသည် မရှိ။
ယောက်မသည် ဟင်း၏အရသာကို မသိသကဲ့သို့
သူမိုက်သည် ပညာရှိအား အသက်ထက်ဆုံး ဆည်းကပ်
ငြားသော်လည်း သူတော်ကောင်းတရားကို မသိချေ။
လျှာသည် ဟင်း၏ အရသာကို သိသကဲ့သို့
လိမ္မာရေးခြားရှိသူသည် ပညာရှိအား တခဏမျှ ဆည်းကပ်ရမူ
ကျမ်းဂန်အထောက်အထားမရှိဘဲ စကားကို မဆိုရာ။
ကိုယ်နှင့် လျောက်ပတ်သင့်မြတ်သော ချစ်အပ်သူကိုရှာရာ၏။
ခွန်အားမရှိဘဲ အသတ်အပုတ် မကြိုက်ရာ။
ပညာမရှိဘဲ စကားများစွာ မဆိုရာ။
မဖိတ်ခေါ်ဘဲ သူတစ်ပါး အိမ်သို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ မသွားရာ။
သူမမေးဘဲ များစွာ မပြောဟောရာ။
မိမိဂုဏ်ကို ထုတ်ဖော်ဝါကြွားပလွှားခြင်း မပြုရာ။
မျက်စိသည် ချစ်သောသူကိုမြင်ခြင်း၌ မရောင့်ရဲ။
ပညာရှိသည် စကားကောင်း၌ မရောင့်ရဲ။
အဆင်းအရွယ် ပြည့်စုံကြွယ်ဝသူပင် ဖြစ်လင့်ကစား
မင်း၊ အမတ် ဖြစ်နိုင်၏။
သူမိက်၏သားပင် ဖြစ်လင့်ကစား ပညာရှိ ဖြစ်နိုင်၏။
ဥစ္စာမရှိသူ၏ သားပင်ဖြစ်လင့်ကစား ကြွယ်ဝချမ်းသာနိုင်၏။
ထို့ကြောင့် ယောက်ျားတို့ကို အထင်မသေးအပ်။
အတတ်ပညာကို လိုသဖြင့် အထူးထူး အပြားပြားများစွာ
သင်ယူသော တပည့်သည် အိမ်မက်ကို ပြန်မပြော
သူအကဲ့သို့ ထိုအတတ်ပညာကို ပြန်ဆိုခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ရာ။
အိုးလုပ်သူသည် အိုးကိုကွဲစေအောင် ရိုက်ခတ်ခြင်းမဟုတ်၊
လှပတင့်တယ် ကောင်းမွန်စေရန်သာ ရိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ ဆရာသည် တပည့်တို့ကို ထိခိုက်နစ်နာစေလို၍
ဆုံးမခြင်းမဟုတ်၊ အတတ်ပညာ အကျိုးစီးပွားရစေရန်သာ
တောင်ဇလပ်ပန်းကို ထုပ်သော ပေါက်ဖက်သည်
ထိုပန်း၏ ရနံ့အတိုင်းပင် မွှေးကြိုင်၏။
ပညာရှိနှင့် ပေါင်းဖက်သော သူတို့ကိုလည်း
ဟင်္သာတို့အလယ်၌ ဗျိုင်းသည် မတင့်တယ်သကဲ့သို့
ပညာမရှိသူသည် လူပုံအလယ်၌ မတင့်တယ်။
သူတော်ကောင်းတရားကို သိရ၍ မြင့်မြတ်၏။
သူယုတ်မာတို့နှင့် ပေါင်းဖက်ခြင်းကို စွန်လွတ်လော့၊
မမြဲသောအဖြစ် (သင်္ခါရတရား) ကို အစဉ်အမြဲအောက်မေ့
သူယုတ်တို့သည် ရေသဖန်းသီးမှည့်နှင့် တူ၏။
အပြင်ပန်းအားဖြင့် အဆင်းရှိသော်လည်း အတွင်း၌မူကား
ပိန္နဲသီးမှည့်တို့သည် ပြင်ပ၌ဆူးများ ရှိသော်လည်း
လောကနီတိ ကျမ်းသည် -
မြွေထက် သူယုတ်မာ သည် ပို၍ အမျက်လွန်၏။
Though the snake can be subdued by charm and drugs, there is no remedy for subduing of the wicked.
When bad results occurred due to his evil deeds, then he gets into trouble.
A monk who does not control thought, world and deed in un-virtuous.
Without strength, do not fighting.
Don't extol and boast of one self.
A half-empty vessel makes most sound.
Atafeast, one loved is wanted.
Staying inanarrow place full of stool is suffering.
One who does so is liked by the virtuous, but disliked by the wicked.
The woman who changes two or three husbands,
The priest, who changes two or three monasteries,
Just asaladle does not know the taste of soup, the foolish knows not Dhamma, even though close to the wise for life.
အရေးအခွင့် ရောက်သည် နှင့် လျော်ကန်သော စကားကို ပြောဆိုရာ၏။
But much as the wealth of the non virtuous can be not useful as water from the ocean.
မတောင့်တ အပ်သည်ကို မတောင့်တ ရာ။
Do not crave for what should not.
The over-avarice has no shame.
The causes of destruction are-
The over intoxication,
The over indulgence in untimely visits,
The over enjoyment of entertaining pleasure,
The over gambling,
The over-association with the bad,
The over-procrastination and laziness
The property of the non-industrious will inevitably get into the hands of the industrious.
If all endeavors arrive at not fruitful end, no blame or anger is placed on the outcome.
Abandon associate with the wicked.
The miserly can be overcome by lavish giving.
လောက၌ အသက်ရှင်လျက် သေသူဟု ဆိုအပ်သောသူငါးယောက်တို့ကား -
- မင်းဝယ် ကိုယ်ကြပ် ခစားထမ်းရွက်ရသူ
* A bad place,
စိတ်သဘောထား ယုတ်ညံ့သူသည် နှမ်းစေ့သဖွယ် သေးငယ်သော သူတစ်ပါး၏ အပြစ်ကို ရှုမြင်တတ်၏။
အုန်းသီးလောက်ကြီးမားသော ကိုယ့်အပြစ်ကိုမူ မရှုမြင်တတ်ချေ။
Evil-minded person notices others’ fault, which is as small as sesame seeds.
But he never sees his own fault which is as big as coconut.
မိမိမိုက်လျက် မိုက်မှန်းသိသူကို ပညာရှိဟုဆိုအပ်၏။
မိမိမိုက်လျှက် ပညာရှိဟု အထင်ရောက်သူကိုမူ သူမိုက်ဟု ဆိုအပ်၏။
One who thinks of himself as the wise even though he is foolish, may be said to be the foolish.
"The Life of the Buddha; Buddhism for Beginner"
“The Life of the Buddha; Buddhism for Beginner” (အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစကားပြော) (NᾹRADA THERA) ပြန်ဆိုသူ – ဦးသန်းလွင်
(How & Why)